INVEST-90W မှ ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် သတိပေးချက် JTWC ထုတ်ပြန် « MMWeather Information BLOG
« 90W မုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လာပြီးချိန် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေခန့်မှန်း-GFS MODEL ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် HIGH သို့ ရောက်ရှိလာပြီ »
INVEST-90W မှ ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် သတိပေးချက် JTWC ထုတ်ပြန်
By mmweather.ygn, on October 8th, 2013
အောက်တိုဘာလ ၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၆း၃ဝ နာရီတွင် JTWC မှ 11.8N 96.0E TO 14.3N 89.6E တို့အကြား၌ လာမည့် ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ HIGH အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း TC Formation Alert ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မူလ MTSAT ဂြိုလ်တု animation ပုံရိပ်အရ လေဖိအားနည်းဆဲလ်(INVEST-90W)သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ၁၃ နော်တီကယ်မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။(ပုံ)
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်နေ့ ည(၇း၀၀)နာရီအချိန် မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောမုန်တိုင်းငယ်သည် ပုသိမ်မြို့ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၂၉၀)ခန့်အကွာ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၂၀၀)ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
မှတ်ချက် – GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းချက်များမှ ကိုးကား၍ MMWeather Facebook စာမျက်နှာ တွင် တင်ပြထားသည့် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နှင့် ၁ဝ ရက်အတွက် သတိပေးချက်များသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
WTIO21 PGTW 081000 MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI //SUBJ/TROPICAL CYCLONE FORMATION ALERT//RMKS/1. FORMATION OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE IS POSSIBLE WITHIN 185 NM EITHER SIDE OF A LINE FROM 11.8N 96.0E TO 14.3N 89.6E WITHIN THE NEXT 12 TO 24 HOURS. AVAILABLE DATA DOES NOT JUSTIFY ISSUANCE OF NUMBERED TROPICAL CYCLONE WARNINGS AT THIS TIME. WINDS IN THE AREA ARE ESTIMATED TO BE 28 TO 32 KNOTS. METSAT IMAGERY AT 080532Z INDICATES THAT A CIRCULATION CENTER IS LOCATED NEAR 12.3N 95.0E. THE SYSTEM IS MOVING WEST-NORTHWESTWARD AT 13 KNOTS.2. REMARKS: THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 12.0N 98.0E IS NOW LOCATED NEAR 12.3N 95.0E, APPROXIMATELY 280 NM SOUTH-SOUTHWEST OF YANGON, MYANMAR. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY DEPICTS FORMATIVE BANDING WRAPPING INTO AN IMPROVED LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) WITH PERSISTENT CENTRAL CONVECTION. THE LLCC CONTINUES TO TRACK IN A GENERAL WEST-NORTHWESTWARD TRACK TOWARDS THE CENTRAL BAY OF BENGAL. UPPER-LEVEL ANALYSIS INDICATES THAT THE LLCC IS LOCATED SOUTH OF THE SUBTROPICAL RIDGE AND IS UNDER DIFFLUENT EASTERLY FLOW WITH WEAK TO MODERATE (10 TO 20 KNOTS) VERTICAL WIND SHEAR. DYNAMIC MODELS INDICATE FURTHER CONSOLIDATION AS THE SYSTEM TRACKS INTO AN STEADILY IMPROVING ENVIRONMENT. MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 28 TO 32 KNOTS. MINIMUM SEA LEVEL PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1004 MB. THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS IS HIGH.
နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း – (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်နေ့ ည(၇း၀၀)နာရီအချိန် မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်မှ ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြပါသည်)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၇း၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောမုန်တိုင်းငယ်သည် ပုသိမ်မြို့ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၂၉၀)ခန့်အကွာ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၂၀၀)ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါသည်။ အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်သည် သိသိသာသာရွေ့လျားမှုမရှိဘဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်ရှိနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။
မနက်ဖြန်ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ ကယားပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး၊ လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၄၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ကျန်မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် လှိုင်းအသင့်အတင့် ရှိမည်။
နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများတွင် ထစ်ချုန်းမည့် အခြေအနေများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမည်။
Uncategorized « 90W မုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လာပြီးချိန် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေခန့်မှန်း-GFS MODEL ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် HIGH သို့ ရောက်ရှိလာပြီ »
« 90W မုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လာပြီးချိန် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေခန့်မှန်း-GFS MODEL ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် HIGH သို့ ရောက်ရှိလာပြီ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum